तरकारीमा भएको अस्वभाविक मूल्य वृद्धिले सर्वसाधारण मारमा « News24 : Premium News Channel
तरकारीमा भएको अस्वभाविक मूल्य वृद्धिले सर्वसाधारण मारमा
तरकारीको मूल्य बढ्दा भान्सा महंगो बन्ने गर्छ नै । दैनिक प्रयोगको यस्ता वस्तुको मूल्य वृद्धि नौलो होइन तर कृषकको बारीमा सस्तोमा पाइने तरकारी विचौलियाहरुको उपस्थितिले जहिले पनि महंगोमा किन्न उपभोक्ताहरु बाध्य बन्दै आएका छन् । तर यसपटक भारी वर्षाको कारण र किसानको वारीमा नै तरकारी महंगो परेको तरकारी व्यापारीहरुको जिकिर छ । तर यो मान्न उपभोक्ता तयार नभए पनि उनीहरु महंगो तरकारी किन्न बाध्य बनेका छन् ।
बर्षाको मौसममा उत्पादन हुने तरकारीहरूको मूल्य अधिकतम बढेको अवस्था छ ।
एकै साताको अवधिमा तरकारीको भाउ ५० देखि सय प्रतिशत सम्म बढ्दा हँुदा उपभोक्ताहरु महंगीको मारमा परेका छन । त्यसको असर उपत्यकाको तरकारी बजारमा पनि परेको छ । काठमाडौँ , ललितपुर, भक्तपुर, धादिंग, मकवानपुर आदि लगायतका क्षेत्रमा उत्पादन भएको तरकारी उपत्यकाको कालिमाटी तरकारी बजार, बल्खु, कुलेश्वर, बालाजु लगायत बजारमा बिक्रि हुने गर्दछ । ती बजारको तुलनामा खुद्रा बिक्रेता हुदै उपभोक्तामा पुग्दा अझै महँगो भएर पुग्ने गरेको छ । बोडी सिमीको मूल्य करिब ६६ प्रतिशतले बढेको छ ।४५ रुपैया किलोको बोडी र सिमीको मूल्य ७५ रुपैया पुगेको छ । मूल्य बढेर उपभोक्तालाई समस्या परिरहेकै बेला ब्यापारीले विभिन्न बहाना बनाएर चर्को मूल्य असुल्ने गरेको पनि उपभोक्ताको गुनासो छ ।
तरकारी किन्दा नै महँगोमा किन्ने भएपछि तरकारीको भाउ उपभोक्तासम्म आउँदा बढ्ने स्वाभाविक कुरा भएको कालिमाटी बजारको ब्यापारीको तर्क छ । बर्खाको मौसममा तरकारीहरु कुहिने हुँदा उल्टै घाटा खानुपर्ने जिकिर पनि उनीहरुको छ ।
बर्खाको कारण उत्पादनमा गिरावट आएपछि तरकारीको मूल्य बढेको कालिमाटी फलफुल तथा तरकारी बिकास समितिको कार्यकारी निर्देशक तेजेन्द्रप्रसाद पौडेल बताउनु हुन्छ । तरकारीको भाउ बढेपनि हप्ता दिनमा मूल्य नियन्त्रणमा आउने उहाँको दावी छ ।
तरकारीको मूल्य बढेपछि सर्वसाधारणलाई समस्या परेको छ । दिनहँु उपभोग गर्नुपर्ने हुँदा तरकारी जस्तै महँगो भए पनि किन्नै पर्ने स्थिति छ । तरकारीमा बारम्बार देखिने अस्वभाविक मूल्य वृद्धि स्थायी निराकरण खोज्न आवश्यक नै भइसकेको छ ।
बराहक्षेत्र नगरपालिका बन्यो खुला दिसामुक्त क्षेत्र
महाकालीमा त्रिशूलदेखि ब्रह्मदेवसम्म र्‍याफ्टिङ सञ्चालन हुने
प्रेमीसँग घुम्न गएकी युवती होटलमा मृत भेट्टिइन्
बजेटकाे अाकार १६ खर्बकाे हुने, अर्थतन्त्रकाे अाकार बढेर ३० खर्ब पुग्याे
लालबाबु पण्डितको सम्पत्ति कहाँबाट थुप्रियो ? स्पष्टीकरण यसरी दिए
हराएको १० दिनपछि गोदावरीको फुलचोकी जंगलमा भेटियो १५ वर्षिया बालक
वैदेशिक राेजगार : मलेसिया जान बन्द, ५ वर्षमा 'बाध्यकारी वैदेशिक राेजगारी' अन्त्य गर्ने
सुन तस्करीमा प्रहरीदेखि अदालतसम्म सेटिङ, श्याम खत्री छुटाउने न्यायाधीश को-को ? (भिडियोसहित)
वैदेशिक रोजगारीको विसंगती : परपुरुषसँग सम्बन्ध बढाउँदै श्रीमती, कसरी राख्ने निगरानी ?
प्रतिपक्षकै समर्थनमा नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्यौ: प्रधानमन्त्री ओली
दुर्गम क्षेत्रमा नून महँगो पार्ने सरकारको तयारी